Cimilada iyo xasaasiyadda: astaamaha, astaamaha iyo isbeddelada saadaasha hawada. Saadaasha Shabakadda
Cimilada iyo xasaasiyadda
Jarmal Portillo | 08/04/2021 11:27 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Nidaamka difaaca ee bini-aadamka wuxuu ku guuldareysan karaa inuu biqliyo dadka iyo munaasabadaha qaarkood wuxuuna soo saari karaa xasaasiyad. Waxa ugu caansan ayaa ah in xasaasiyaddu ay keento hindhiso isdaba joog ah oo fadeexo ah, ciriiriga sanka iyo sanka oo si joogto ah u dareera, iyo saameyno kale. The cimilada iyo xasaasiyadda waxay ku qaraabtaan dad badan. Waxaana jira dad xasaasiyad ku qaba isbeddelada cimilada.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ugu badan ee ku soo noqnoqda cimilada iyo xasaasiyadda.
1 Cimilada iyo xasaasiyadda
2 Sababaha cimilada iyo xasaasiyadda
3 Isbedelada saadaasha hawada ee la xiriira
4 Saamaynta dabaysha
Noocan dadka ah, xasaasiyadda ugu badan ee caadi ahaan badanaa waa rhinitis, conjunctivitis xasaasiyadeed iyo calaamadaha qaarkood sida dermatitis ama xaalado aad u daran. Markaan ka hadlayno rhinitis, waxaan ula jeednaa hindhisada joogtada ah ee inta badan na saameysa markaan si aad ah u soo shaac baxno, ciriiriga sanka oo aan noo oggolaaneyn inaan si fiican u neefsanno iyo qulqulo joogto ah oo sanka ah. Rhinitis waa mid ka mid ah calaamadaha ugu xun ee xasaasiyadda ku gudubta. Waa calaamado aad u dhib badan oo mararka qaarkood, aan noo oggolaanayn inaan nolol caadi ah ku dhaqanno. Inaad si joogto ah wax u karisid, hindhiso iyo inaad sanka ka garaacdid wax raaxo leh haba yaraatee.
Calaamadda kale ee cimilada iyo xasaasiyadda waa conjunctivitis. Badanaa waxay leeyihiin astaamo sida cuncun iyo indho cuncun. Waxaa jira dad indhahoodu midab casaan qoto dheer yeeshaan. Cudurka maqaarka, cambaarta maqaarka iyo finanka ayaa sababi kara. Ugu dambeyntiina, qaar ka mid ah xaaladaha cimilada iyo xasaasiyadda ayaa ka sii daran oo weerari kara habka dheef-shiidka iyo neefsashada sida neefta neefta qabta
Sababaha cimilada iyo xasaasiyadda
Inaad xasaasiyad ku yeelato isbeddelada cimilada waxay ka timaaddaa culeyska hidda-socodka iyo deegaanka nagu hareeraysan. Dhammaanteen waxaan leenahay u nuglaansho hidde ah in aan la xanuunsanno ama aan ka imaanno xasaasiyadda noocyada kala duwan ee xasaasiyadda. Noolaha qaar ayaa la iskugu dari karaa qaab ka dhigaya habka difaaca jirka waxay soo saartaa jawaab celin la buunbuuniyey iyo mid taban oo ku saabsan kicinta ama walxaha qaarkood kuwaas oo loo yaqaan xasaasiyadda. Markuu bukaanku la kulmo wakiiladan, waxay ku sugan yihiin xaalad xasaasi ah taxane isugu jira dhacdooyin unugyo iyo kiimiko isugu jira oo dhaliya falcelin siyaabo kala duwan qof walba u qabo.
Calaamadaha ugu caansan waa kuwa aan kor ku soo xusnay, laakiin xooggooda iyo soo noqnoqodoodu waxay ku xirnaan doontaa nooc kasta oo qof ah iyo heerka uu gaadhayo xasaasiyadda. Xasaasiyaduhu waa wakiilada ka masuulka ah xasaasiyadaha. Kuwaani waxay noqon karaan: cuntada, daawooyinka, waxyaalaha hawada ka soo baxa sida manka, kiimikooyinka, fungi, caaryada, caarada iyo xayawaanka xoolaha, iwm. Markay xasaasiyaadyadan la soo xiriiraan noolaha, nidaamka difaaca jirka wuxuu u aqoonsadaa inay yihiin walxo khatar ah wuxuuna isku difaaci karaa weerar, kuwaas oo ah jawaabaha kuwa u muuqday kuwa aan kor ku soo xusnay.
Dabayshu waxay mas'uul ka tahay kala-daadinta manka dhirta si loo ballaariyo aagga qaybinta dhirta. Taasi waa sababta isbeddelka cimiladu u keeni karaan xasaasiyad. Waana markaynu xilliyada beddelno, sidoo kale dabaylaha, xooggooda iyo jihada intaas ka sokow in dhirta ay bilaabaan marxaladooda ubax. Tani waa marxaladda ubax ee ay ku abuuraan manka si ay ugu faafaan dhulka.
Isbedelada saadaasha hawada ee la xiriira
Hadda oo aan ognahay in xasaasiyado ay mas'uul ka yihiin inaan yeelano astaamaha xasaasiyadda, aan aragno waxa ay cimilada iyo xasaasiyaddu ku leeyihiin. Waa inaan fahanno in xasaasiyadda ay leedahay isbeddelka cimilada lafteeda aysan jirin. Maaha inaan horumarin doono astaamaha kahor intaan la badalin qaar ka mid ah doorsoomayaasha saadaasha hawada ee tilmaamaya deegaanka ama deegaanka qofka waqti cayiman. Tani lafteeda ma aha xasaasiyad. Marar badan, isbeddelka cimilada ayaa kicinaysa kororka ku urursanaanta wakiilada xasaasiyadda qaarkood ee hawada ku jira, taas oo ah waxa ka qayb qaata falcelinta xabka ee xasaasiyadda ku dhaca.
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno kuwaas oo ah isbeddelada saadaasha hawada ee inta badan la xiriira astaamahan. Isbeddelada degdega ah ee heerkulka hawada iyo qoyaanka badanaa waxay soo saaraan calaamado qaar ka mid ah kuwa xasaasiyadda qaba. Tanina waa sababta oo ah xuubka xuubku wuxuu ku falceliyaa dhacdadan. Isbedelada heerkulka hawada iyo qoyaanka ayaa sababi kara caabuq. Dhinaca kale, heerkulka hooseeya wuxuu soo saaraa isbeddello ku dhaca xulashada sanka iyo bronki-ga. Tan macnaheedu waa tan waxay qandaraas siin doonaan darbiyadooda waxayna yareeyn doonaan farsamooyinka difaaca dabiici ahaan hawada. Isbeddeladani waxay sababaan infekshannada fayras ee neefsashada.
Haddii aan u leexanno dhanka kale, waxaan aragnaa in guga uu sii kordhayo saadaalinta imaatinkiisa, maadaama ay jiraan daraasado qaar oo xaqiijinaya kuwa qaar Geedaha dhirtu ka baxdo ee Isbaanishka waxay soo baxaan 20 maalmood ka hor 50 sano ka hor. Isbeddelkani wuxuu beddelayaa horumarinta dhirta oo leh muddo dheer oo wasakhaynta ah. Maskaxda ku hay in haddii ay tani sii socoto, dad badan oo xasaasiyad ku leh manka ay u soo jiidan doonaan dhibaatadan muddo dheer sannad kasta.
Waqtigu waa mid kale oo ka mid ah xuduudaha saadaasha hawada ee ugu muhiimsan ee la tixgelinayo. Waxay mas'uul ka tahay abaabulka nabarrada fangaska iyo manka hawada. Maalmaha ay jiraan dabayl guga oo aad u badan, laguma talin karo inaad dibadda u aado dhammaan kuwa xasaasiyadda ku leh. Kala firidhida iyo uruurinta xasaasiyaduhu waxay kuxirantahay isku dhafka ay soo saarto dabayshu. Waxay kuxirantahay jihada iyo xawaaraha, tirinta walxaha la hakiyay waa la sameyn karaa waxaana la darsi karaa tayada hawada si loo sameeyo saadaal digniin ah oo loogu talagalay faa iidada dadka qaba xasaasiyadda.
Thanks to taasi, Maanta waxaan haynaa xog tilmaamaysa xaddiga manka ee hawada ku jira maalinba maalinta ka dambeysa si loo ogaado haddii ay tahay inaan u baxno taxaddar ahaan ama si ka wanaagsan inaan guriga joogno si looga fogaado fal-celinta xabka.
Cimilada iyo xasaasiyadda sidoo kale waa in lagu sameeyaa xaddiga huurka, roobka iyo dhaxanta ku jirta deegaanka. Waana in hawlahan saadaasha hawadu ay keenaan shaandheyn ama nadiifinta deegaanka. Taas macnaheedu waa in miraha manka ay qabsadaan dhibcaha roobka, markay culus yihiina, waxay ku dhacaan dhulka oo wey sii jiraan. Waa wax caadi ah in la fiirsado in dadka xasaasiyadda qaba ay xilliga gu'ga calaamadaha ka sii daraan maalmaha qorraxda iyo dabeylaha, halka ay ka fiicnaadaan maalmaha roobka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto xiriirka ka dhexeeya cimilada iyo xasaasiyadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Cimilada iyo xasaasiyadda